Aloe Claming Cream 50ml
About BrandDABO Cosmetics သည် ကိုရီးယားရိုးရာ တိုင်းရင်းဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများမှ ကိုရီးယားအလှကုန်ပစ္စည်းများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနည်းပညာရပ် အား ချဲ့ထွင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် DABO Brand..
Aloe Soothe Lotion 250ml - 24
Vaseline Intensive Care Aloe Soothe Body Lotion isalotion that calms and soothes the discomfort associated with dry, irritated skin and leaves it feeling deeply moisturized and rejuvenated. It is li..
Aloe Sun Cream 70ml
About BrandDABO Cosmetics has tried to seek beauty products from Korean tradition. Since they expanded the technology, the brand has been popular in Korean beauty industry. Headquartered in South Kore..
Amber Healthy & Beauty Product
သနပ်ခါးသည် အသားအရေနှင့် ကျန်းမာရေးကို အထူးကောင်းစေသော သနပ်ခါး၏သဘာဝကူခရင်ဒြပ်ပေါင်းနှင့် ပယင်းအဆီတွင် Antioxidant များပါဝင်သည့်အတွက် အသားအရေကို ချောမွေ့နူးညံ့ပီးအရွယ်တင် နုပျိူစေပါသည်။နေလောင်ခြင်းမှလည်..
Amber Night Cream
Emoshaက စေးကပ်နေတာမျိုးမရှိပါဘူး အသားရည်ပေါ်တင်လိုက်ရင်ဓာတ်မတည့်လို့မျက်နှာစပ်တာ ပူတာတွေလဲမဖြစ်ဘူးအေးအေးလေးနဲ့နေလို့အရမ်းကောင်းပါသည်။အသားရည်ကို ကောင်းကောင်းtreatmentလုပ်ပေးပါသည်။မျက်နှာအတွင်းပိုင်းကဆဲ..
Apple Body Lotion 500ml
မျက်နှာအသားအရေလိုပဲ ခန္ဓာကိုယ်အသားအရေကလည်းခြောက်သွေ့နိုင်ပါတယ်။ တနေကုန် အစိုဓာတ်ပြည့်ဝနေမှ ပက်ကြားအက်တာ အသားအရောင်မွဲတာတို့လို အသားအရေပြဿနာတွေမဖြစ်မှာပါ။ တစ်နေ့တာလုံး လိုအပ်တဲ့ အစိုဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းဖိ..
Aqua UV Essence Sunscream 50g
About Brand Ma’suri Brand သည် ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် Beauty & Lifestyle Brand တစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာ အမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ အသားအရည်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ Wat..
Aroma Skin-perfecting Purifying Lotion - 200 ml
About the ProductIt moisturizes the skin and tightens pores without drying out the skin. It reduces dark spots, wrinkles and fine lines. This isamust have product for your daily skin care rountine a..
Avocado Body Lotion 500ml
Bariederm Cica-Cream 40ml
Cu-Zn ပါဝင်တဲ့ Bariéderm Repairing Cica-Cream က Weakend and irritated skin ပိုင်ရှင်တွေမရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Daily skin care တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။Poly-2p ပါဝင်တဲ့အတွက် အသုံးပြုလိုက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် အ..
Bariesun Lotion SPF 50+ 100ml
VERY HIGH PROTECTIONPrevents photoagingUriage Thermal Water, at the core of Bariésun formulas, fights against the harmful effects of the sun. The skin barrier is therefore reinforced and the DNA is pr..
Bariesun Lotion SPF 50+ 100ml (Kids)